Abakhiqizi bemikhiqizo - Abahlinzeki bemikhiqizo baseChina, Ifektri
Amamitha wamanzi ahlakaniphile asebenzisa i-valve yokulawula enobuhlakani njengetafula lesisekelo .Kubonwa i-MCU yebhokisi ledivayisi ye-optoelectronic, module yezokuxhumana kanye nesekethe yokulawula esebhokisini eliphikisayo. ithuthukiswe futhi yakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T778.1, CJ / T188, CJ / T224.
I-terminal yokuhlola amandla kagesi esebenza ngogesi isetshenziselwa kakhulu ukusetshenziswa kwezigaba ezintathu zamandla, futhi ingafakelwa umsebenzi wokuxhumana we-RS485 nomsebenzi wokuxhumana okungenantambo, okulungele abasebenzisi ukuthi basebenzise amandla, ukuqoqwa kanye nokuphathwa kokuqapha kokude. Umkhiqizo unezinzuzo zokucaca okuphezulu, usayizi omncane, nokufakwa okulula. Ingafakwa kalula futhi isatshalaliswe ebhokisini lokusatshalaliswa ukuthola isilinganiso samandla afakiwe, izibalo nokuhlaziywa kwezindawo ezahlukahlukene nemithwalo ehlukile.
I-terminal yokuhlola amandla kagesi esebenza ngokuphele (iziteshi ezi-4) ingumkhiqizo omusha wamandla we-metering owenziwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu. Lo mkhiqizo usebenzisa iziyingi ezinkulu ezihlanganisiwe nezinqubo zokukhiqiza zeSMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
Isigaba ezintathu se-LCD esishunyekwe ekubonisweni kwedijithali yamandla kagesi esebenza ngemisebenzi eminingi nge-rs485
Isisetshenziswa sokufakelwa esisetshenziselwe ukusebenza ngezigaba ezintathu, uhlobo lwensimbi ehlakaniphile kagesi enesilinganiso sokuhleleka, isibonisi, ukukhulumisana kwedijithali kwe-RS485 namandla okukhipha amandla kagesi, okwazi ukukala voltage, amandla wamanje, amandla asebenzayo, amandla asebenzayo, amandla kagesi, imvamisa, ukukalwa kwamandla . Ukunemba kokulinganisa kuyizinga 1, kufinyelela iLCD noma isibonisi se-LED kusayithi kanye nokuxhumana okukude kwe-RS485. Iyahambelana ne-protocol ye-DL / T645-2007 ne-protocol yokuxhumana ye-MODBUS-RTU.